Accountant (Terabit Wave Co., Ltd.) | A1 Group of Companies ﻿
2.8.2020, Full time , Construction / Building
•	အခွန်စာရင်း ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	စာရင်းဇယား တိကျပိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Trading စာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Must be finish LCCI Level- III.
•	English Basic.
•	Must have Audit sense.
•	အခွန်စာရင်း ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်နိုင်ရမည်။
•	A1 Group of Companies ၏ Branch ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Terabit Wave Co., Ltd. တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
Accountant (Terabit Wave Co., Ltd.) Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon A1 Group of Companies Accountancy Jobs Accountancy Jobs Construction / Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon